Semalt Expert: Ahoana ny fialana amin'ny Botnets?
Ny Internet of Things (IoT) dia teknolojia vaovao izay tompon'andraikitra amin'ny fampifandraisana ireo fitaovana sy zavatra samihafa amin'ny aterineto. Izy io koa dia manome angona ilaina amin'ny fikarakarana ny ordinateranao na ny fitaovana findainao. Amin'ny hazakazaka vokarin'ny fifaninanana, ny mpampiasa sy ny orinasa dia namorona teknika mampidi-doza, anisan'izany ny botnets.
Ny Artem Abgarian, manam-pahaizana ambony indrindra avy amin'ny Semalt , dia mifantoka amin'ny hoe ny botnets dia vondron'ny solosaina mifandray amin'ny aterineto mifandray amin'ny aterineto mifehy azy amin'ny orinasa na orinasa foibe. Ity teny ity dia matetika ampiasaina amin'ny fifandimbiasana hacks manokana, indrindra fa ny fandavana ny tsy fanajana ny fanompoana (fanafihana DDoS).
Ahoana ny fomba ataon'ireo mpanakorontana ny asany?
Miaraka amin'ny fanampiana amin'ny botnets sy ireo solosaina an'arivony maro, ireo hackers dia afaka mijery mora foana ny adiresy IP. Mampiasa ny adiresy IP miavaka izy ireo hanavaka ireo mpampiasa ara-dalàna sy sandoka. Raha vao nahita ny fitaovana an-tserasera sy adiresy IP izy ireo, ny tanjony manaraka dia ny hampiditra ireo fitaovana ireo mba hahafahany manatanteraka ny andraikitra manokana.
Danjana # 1: Fongana ny vaovao
Ny Internet of Things dia afaka mangalatra mora foana ny tsipirian'ny tenanao manokana sy ny angona manokana. Miara-miasa amin'izy ireo izy ireo na tsy misy ireo jiolahy ratsy ary manara-maso mangina ny zavatra ataonao. Raha vantany vao mivoaka ny rafitrao ianao dia manomboka avy hatrany manao ny asany izy ireo ary misintona ny fitaovanao amin'ny fotoana tsy misy..
Hazavana # 2: Ireo fitaovana tsy laitra indrindra indrindra PC
Ny tsenam-barotra dia tondraka amin'ny ordinatera mora vidy sy tsy misy vidiny sy fitaovana finday, webcams, thermostats, yoga mats, boaty mofomamy ary mpitaingina zazakely. Tokony hialana amin'ny fividianana zavatra izay tsy misy ny marika, ary izany dia an'ny marika hafahafa na tsy fantatra. Izany dia noho ny loza isan-karazany mifandray amin'ny fitaovana toy izany. Ny botnets dia mety hanome azy ireo ny tra-boina amin'ny fanandevozana ny mombamomba azy ireo. Ireo fitaovana rehetra ireo dia tokony hifandray amin'ny aterineto ary manana ny adiresy manokana. Miaraka amin'ny fiarovana kely na tsy misy fepetra, mety ho very ny fahafahanao miditra amin'ny fitaovana misy anao, ary mety haka an-keriny ny anaranao sy ny tenimiafinao tsy ho ela ny mpihoko.
Danjana # 3: Tsy misy filaminana anatiny - tsy misy fidirana amin'ny fitaovana
Tena ilaina ny fametrahana programa fanoherana malware na software antivirus. Tokony hanara-maso tsy tapaka ny asanao an-tserasera ianao ary manana tahirin-tahirin-tahiry. Tandremo ny paositry ny fandriam-pahalemana ary aza adino ny mitazona azy ireo amin'ny fampivoarana. Ankoatra izany, tokony hanana tenimiafina matanjaka amin'ny teny ambony sy ambany ianao mba tsy hisy hahatsapa azy mora foana. Tamin'ny taona 2016, ny botnets dia nanaparitaka fitaovana marobe maro, satria fotsiny hoe mora ny maminavina ny tenimiafiny. Amin'ny ankapobeny, ireo fitaovana an'arivony IoT dia niharan'ny fampihorohoroana ary natolotra ireo mpanome tolotra aterineto ho an'ny fikojakojana. Na ny tranonkala tahaka ny Twitter sy Netflix aza dia voaantso, ary vetivety dia nanjavona tao amin'ny aterineto ireo mpanakorontana taorian'ny nanaovana ilay heloka.
Ny botnets izay nanao ireo asa ireo dia noforonina miaraka amin'ny malware fantatra amin'ny anarana hoe Mirai. Ity malware ity dia tompon'andraikitra amin'ny fangalarana ny angona manokana sy ny tenimiafina amin'ny fitaovana maro. Tsy maloto fitaka izany, ka mora ny fanesorana azy. Ny fanafihan'ny DDoS dia miely be sy matetika toy ny botsa sy ny sponjy. Niditra tao amin'ny ordinatera sy ny fitaovana finday izy ireo, nangataka tamin'ireo mpampiasa mba hitsikitsiky ny dokambarotra hosoka ary hanamarina ny vohikalan'ny fiarahamonina Source .